नेप्सेको सिस्टममा घरी घरी समस्या, अर्को स्टक एक्चेन्ज आउला त ? « Tattatokhabar
नेप्सेको सिस्टममा घरी घरी समस्या, अर्को स्टक एक्चेन्ज आउला त ?
काठमाडौं । सेयर बजारमा नयाँ प्रविधि भित्रिने क्रमले प्राविधिक समस्या देखिन थालेकाले यसको समाधानका लागि प्रयास भईरहेको छ । सेयर बजारमा विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिन थालेपछि यसको समाधानका लागि नयाँ कम्पनि स्थापनाको तयारी भएको जनाएको छ ।
विगत केही दिनयता ब्रोकर कम्पनीका ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएसमा) समस्या आएपछि लगानीकर्ता मारमा परेका थिए । बेलाबेला आइपर्ने समस्या समाधानका लागि धितोपत्र दलाल व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा सेयर बजारमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी स्थापना गर्ने पहल हुन थालेको छ ।
स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष भरत रानाभाटले सेयर बजारसँग सम्बन्धित सबै प्राविधिक काम गर्न र डाटा सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्ने कम्पनीको खाँचो महसुस गरिएकाले छुट्टै कम्पनी स्थापनाको पहल थालिएको बताए ।
सो कम्पनीमा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, सफ्टवेयर कम्पनीलगायत अन्य सरोकारवालाको संयुक्त लगानी रहेको उनको भनाई छ । कम्पनी स्थापनाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । कम्पनी स्थापनाका लागि हाल ब्रोकर एसोसिएसनको सूचना प्रविधि समितिले काम गरिरहेको छ ।